Madaxweyne Trump”Waa ceeb in la i weydiiyo xiriir in uu igala dhexeyo Ruushka” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Trump”Waa ceeb in la i weydiiyo xiriir in uu igala dhexeyo...
Iyadoo ay sii xoogaysanayaan eedeymaha ku aadan in madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Jey Trump uu xiriir uu kala dhexeeyo hoggaamiyaha Ruushka Putin ayaa hadana madaxweyne Trump wuxuu si weyn uga soo horjeestay eedeymahaasi, oo uu ku tilmaamay abeen abuur.
Madaxweynaha Mareykanka oo warbaahinta kula hadlayay bannaanka Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay su’aasha la isweydiinayo oo ah xiriirka isaga iyo Putin,mar uu ku sii wajahnaa gobolka Louisiana ee dalkaasi Mareykanka.
Mr Trump ayaa k ajawaabay warbixino ay daabacen Jariiradaha Washington Post iyo Newyorka Times, oo muujinaya in Trump uu daboolayo kulan uu dhexmaray isaga iyo Putin goor hore,taasi oo shaki dhalinkarta,iyo sidoo kale markii uu xafiiska ka eryay agaasimihii hay’addaasi, James Comey, bishii May ee sanadkii 2017,taasi oo keentay in Shakiga FPI-da Mareykanka uu sii xoogaysto.
Waxakale oo uu qorey wargeyska New York Times inuu howlahaasi uu lawareegay golaha gaarka ah ee wasaaradda cadaaladda ee uu hogaaminayo Robert Mueller.
Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Trump waxaa jiray shaki ku aadan in doorashadii dhacday 2016 uu galangal ku lahaa dalka Ruushka,waxaana kala aragti duwanaansho ka dhexjirta Trump iyo hay’adaha amniga dalkaasi qaarkood oo arrimahaasi laxiriira.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka qayb-galay xaflad lagu soo xirayay Kalfadhig 4-aad ee Golaha Shacabka
Next articleMadaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland oo Kormeer Ku Sameeyey Xaafiisyada Madaxtooyada ee Maamulkaasi